Inweta ego site na blog gị ọ dị mfe ịchụ ego karia ịmalite azụmahịa omenala ma ị gaghị eleba iwu iwu mkpochapụ anya ma ọ bụ tinye maka ikikere ụlọ.
Otu n’ime iwu iwu kachasị mkpa ma dị mkpa bụ iwu nzuzo, nke a na-emetụta weebụsaịtị, nnukwu ma ọ bụ obere. Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmahịa ma ọ bụ ọbụnadị blogger na-enweghị ego site na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ejighị n’aka ihe kpatara ụwa na mbụ ị ga-achọ otu, ị nwere ike ijuanya.
Iwu nzuzo bụ akwụkwọ na-akọwa ihe gbasara ozi nkeonwe ị laman nakọtara n’aka ndị ọrụ gị, otu ị si eji ya, na otu ị si edebe ya.
Na oge ụmụma, data bụ ego ọhụrụ. Ozi nzuzo nke ndị mmadụ n’otu n’otu bara ezigbo uru nye ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ, na gọọmentị.
Taa, ọtụtụ mba na-eleba anya na nzuzo dị ka ikike dị mkpa nke ụmụ mmadụ, ha agafewokwa iwu iji chebe ndị mmadụ laman web n’ihe ọmụma ha na-anakọta ma jiri na-enweghị ihe ọmụma ha. Iwu nzuzo nzuzo na-achọkarị na onye ọ bụla na-anakọta ozi nkeonwe site na ebe nrụọrụ weebụ ha ga-enwe nkwupụta na otu na ihe kpatara ha ji eme ya.
Dịka ọtụtụ iwu nzuzo, ị nwere ike ikpebi ma ọ bụ ọbụna na-eme mkpesa ma ọ bụrụ na ịnakọta ozi nkeonwe na-agwaghị ndị ọrụ gị, ma ọ bụ ma ọ bụrụ naị.
Ntuziaka nchekwa data dan data Kesatuan Eropah 1998 ekwu na onye ọ bụla nhazi data nke onwe ya aghaghị ime ya n’ụzọ ziri ezi ma kwadoro. Iji mee ka nchịkọta data ada ya d ya ka iwu kwadoro, data ga-anakọta nanị maka akọwapụtara nke ọma, nke doro anya na nke ziri ezi.
Nzuzo UK dan Usoro Ntanetị Electronic 2003 na-egbochi ojiji nke kuki na teknụzụ ndị yiri ya na ngwaọrụ ndị ọrụ ọ gwụla ma ndị ọrụ 1) doro anya banyere nzube nke ojiji nke kuki na 2) enyewo nkwenye ha.
Laman web: https://www.iubenda.com/
Tinye ọrụ (ntụgharị Google Adsense) ị na-eji na ụdị data ị na-anakọta,
Karịa ọrụ 600, gụnyere Facebook Like, Google Adsense, Google Analytics, butang LinkedIn, Twitter, Alexa Metrics, Amazon Associates; edozi ya na usoro ozo.
Na ego nke $ 39 / bln (aduh!), Usoro ahụ ga-enyere aka:
Sochie, ndekọ, ma weghachite njirimara onye ụrụ na ngwaọrụ nchịkwa Nzuzo.
Laman web: www.shopify.com/tools/policy-generator
Shopify na-enye ngwá ọrụ dị mfe ebe ị nwere ike ịmepụta nkwụghachi ụgwọ na usoro nke iwu ụrụ pasar n’efu.
Ọzọkwa – g nyochaa Shopify anyị.
Ik n ike ịpị "Hụ na ị ga-achọ ikpe ikpe" igbe ma mepụta iwu nzuzo gị n’efu.
Chebe onwe gị site na iji otu n’ime ngwaọrụ ndị dị n’elu iji mepụta iwu nzuzo gị ugbu a, ị gaghị echegbu onwe gị! Usoro ahụ ga-enyekwara gị aka atamata onwe gị na nkọwa bara uru na nzuzo onye ọrụ.